Kobcinta Lab | Kiniin Kobcinta Ragga | Guska Kordhinta | Ragga Caafimaadka
DIIWAAN GELI KARO IYO DHAQANKA
FADLAN MAXAMED SALDHIG
Sikander-e-Azam oo lagu daray Kaabsoosha ayaa isbeddelaya nolosha galmadaada. Way adagtahay, dhismooyin dhaadheer! Farxad galmo badan!
Kordhinta kacsiga iyo muddada.
Hayso libido badan.
Habeenkii oo dhan sii joog.
Ecstasy waa mid aad u xoog badan oo xoog badan.
Raggaagu ha ka yaabina dumarka.
Tijaabi Sikander-e-Azam oo lagu daray kaabsalka TODAY! Qancitaanka Dammaanad Leh!
Noqo qof aan jeclayn oo Sikander-e-Azam oo lagu daro.
Iyada oo ay weheliso Sikander-e-Azam, nin kasta wuxuu ku raaxaysan karaa galmada iyo sheegashada, taas oo ku kaxayn karta haweeney kasta oo waalan.
Sikander-e-Azam oo lagu daray waa kiniinka kaliya ee 100% dabiiciga ah, amaan ah oo wax ku ool ah oo bixin kara xallin buuxda nolosha galmo ee ragga. Kaliya Sikander-e-Azam waxaay u dammaanad qaadaysaa sirdoon, xoog iyo madadaalo iyada oo aan la helin halista caafimaad iyo rijeetooyinka. Tani waa sababta oo ah Sikander-e-Azam oo lagu daro waxyaabaha isku-dhafan ee dabiiciga ah iyada oo la uruuriyay waxyaabo waxtar leh oo waxaad u baahan tahay inaad ka hesho natiijooyinka ugu fiican libido-kaaga.
Bal qiyaas inaad ku isticmaasho saacado adoo ku ciyaaraya ul culus oo aad ku raaxaysatid habeen cajiib ah. Bal qiyaas weji af furan oo balaaran markay aragto sida uu u adag yahay guska adag ee Sikander-e-Azam iyo Capsule. Bal qiyaas nolosha galmada, niyadda, caafimaadka, iyo kalsoonida aad had iyo jeer rabtay!
Fekerka jooji: Tag Sikander-e-Azam oo lagu daro Capsule oo ha u oggolaato haweenka inay istaagaan oo dawarsadaan.
TRY Sikander-e-Azam oo lagu daray Capsule TODAY! Qancitaanka Dammaanad Leh!
Ku xooji rabitaanka galmada ragga Ssuander-e-Azam Plus kaabsal.
Qaadashada kaabsoosha Sikander-e-Azam Plus iyadoo la raacayo tilmaamaha waxay yeelan doonaan saameynta soo socota:
Awooda galmada ee sareysa.
Marka lagu daro jihada wanaagsan ee galmada iyo madaddaalada oo kordha, Sikander-e-Azam iyo Capsule waxay sidoo kale kaa dhigayaan kuwo firfircoon habeenkii oo dhan, iyada oo aan lagaa joojin. Ka faa'iidayso astaamaha galmada cusub.
Qaado hal kaabsoosha maalinti wakhtiga jiifka waxaadna dareemi doontaa saamaynta, xooga iyo mudada kacsiga inta lagu gudajiray usbuuca ugu horeeya ee rabitaanka galmada. Madadaalo iyo galmo wanaagsan.
Neefsasho aad u xoog badan, xoog badan oo xoog leh ayaa ka dhigaysa farxaddaada wax aadan aqoon. Adiga iyo lammaanahaada waad la yaabi doontaan!
Waxaan sharraxnay sababta ay Sikander-e-Azam ay u dheertahay Capsule
Baro wax badan oo ku saabsan ficillada kaabsoosha ka caawin kara hagaajinta nolosha galmadaada.
Guska gudahiisa waxaa ku yaal jirrooyin godad ah, kuwaas oo u eg qolal dhiig ka buuxa. Marka qolalkaas gabi ahaan ay ka buuxaan dhiig, way fidayaan waxayna keenaan kacsi daran.
Awooda kaydinta dhiiga badan ee corpora cavernosa, xoogga weyn ee kacsiga. Si kastaba ha noqotee, si tan loo gaaro, jir caafimaad leh oo isbuunyo qaba oo leh qulqulka dhiigga oo sarreeya iyo dheellitirka hormoonnada ayaa loo baahan yahay si loo kiciyo rabitaanka galmada.
Oo halkan waa Sikander-e-Azam oo lagu daro kaabsoosha. Waxay ka shaqeeyaan afar waji oo go'aan ka gaaraya tayada galmada iyo xoogga kacsanaanta.
1.Corpora Cavernosa iyo caafimaadkeeda.
Sikander-e-Azam iyo Kaabsooshaka ayaa kordhinaya bixinta dhiigga qulqulka caponosa, Dhiiga badan ee ku dhaca guska wuxuu keenaa kacsanaan xoog badan oo joogto ah..
3. Habka Dib-u-Cusboonaysiinta unugyada
Si kor loogu qaado faafitaanka unugyada Cavernosa ee soo saaraya ruxitaanno yaab leh, jirkaagu wuxuu u baahan yahay inuu si dhakhso leh u soo saaro unugyo cusub. Sidaa darteed, Sikander-e-Azam iyo Capsule waxay hodan ku yihiin antioxidant-ka waxaana loo muujiyey inay gacan ka geysaneyso abuurista unugyo cusub.
2. Hormones dheellitiran
Sikander-e-Azam oo kaabsoosha ah ayaa sidoo kale gacan ka geysanaysa kordhinta isku-darka hormoonnada, testosterones, kuwaas oo badanaa mas'uul ka ah rabitaanka galmada lab oo saameyn xoog leh ku leh xoogga kacsiga iyo tayada orgasms..
4. Tamarta iyo Dabeecadda
Intaa waxaa sii dheer, Sikander-e-Azam iyo kuwa kaabsoosha ah ayaa lagu soo rakibay maandooriyayaal bixiya tamar dheeraad ah si aad ugu raaxeysan karto awoodaada iyo maskaaga habeenka.
Isku day Sikander-e-Azam oo lagu daray kaabsoosha Beddel noloshaada galmada maanta
Chlorophytum borivilianum waxay iska leedahay boqortooyada Plantae iyo qoyska Liliaceae oo loo isticmaali jiray inay ku xoojiso awoodda lab, xoojinta tamarta. Walxaha kiimikada ugu weyn ee geedkaan waa saponin, tannins, glycosides iyo alkaloids.
Mesua ferrea, oo sidoo kale loo yaqaan Nagkesar, waa geed weligiis aad u qurux badan, oo loo adeegsaday Ayurveda kumanaan sano si loogu daweeyo daciifnimada aadanaha.
Withania Somnifera, oo loo yaqaan Ashwagandha, waa geedo dawo caafimaad leh oo aan caadi aheyn. Waxaa loo isticmaalay in ka badan 3,000 sano si loo yareeyo buufiska, loo kordhiyo heerarka tamarta loona hagaajiyo feejignaanta. Tani waxay kordhin kartaa testosterone waxayna kordhin kartaa bacriminta ragga.
Xarkaha, Kordhinta Wareegga, kor u qaad kulka-kulka, iyo waxay ka caawisaa Iskuxirka Galmada. Tonic maskaxda wanaagsan sidoo kale.
Sikander-e-Azam iyo Kaabsoosha, oo ah koox Dhakhaatiir ah Tijaabisay ITOOBIYA.
Tani waa amaan, cilmi ahaan la xaqiijiyey, waxaana ogolaaday khubaro hogaamineysa.
Sikander-e-Azam oo lagu daray qaaciddada ayaa ka kooban kumanaan kun oo sanadood oo ah maaddooyinka dabiiciga ah ee loo adeegsado la-dagaallanka unugyada lab, ku dar libido, tamarta iyo niyadda, iyo raaxada galmada. Dhammaan waxyaabaha kujira ayaa si cilmiyaysan loogu tijaabiyay sheybaarka waxaana si guul leh loogu adeegsaday qarniyo badan si loo daweeyo unugyada galmada ee ragga kaladuwan dhib la'aan..
Khubaro ku xeel dheer dhammaanba Caafimaadka Male waxay kugula talinayaan Sikander-e-Azam iyo qaaciddada si loo abuuro xalka ugu wanaagsan ee raaxada galmada.
"Qaaciddada qaaska ah ee Sikander-e-Azam waxaa lagu daraa heerarka caalamiga ah ee awoodda badan ee tayada iyo amniga. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa ah tan ugu wanaagsan ee suurtagal ee lagu bixin karo kacsiyo badan, raaxeysi galmo oo sarreeya iyo caafimaadka guska. Sikander-e-Azam waxaa kale oo ay abuurtaa duruufaha ugufiican ee aad ku raaxeysan karto noloshaada galmada si amaan ah, caafimaad leh oo raaxo badan."
isku day Sikander-e-Azam oo lagu daray Capsule maanta! Satisfaction Guaranteed!
MAGACA DHAMMAAN EE KU SAMEE KU SAABSAN Sikander-e-Azam oo lagu daray CASUUX
Fiiri qaar ka mid ah sheekooyinka guusha ee aan maalin walba helno.
Xarsh iyo kacsanaan waara.
"Aniga markasta waxaan dhibaato ku qabaa kacsanaanta daciifka ah. Had iyo jeer waxaan moodayay inay madaxayga tahay ama wadnahaygu yahay. Waxaan raadsaday cilmi-nafsi, daaweeye iyo dhakhaatiir si ay u daweeyaan caafimaadka ragga. Kaliya Sikander-e-Azam iyo Kaabsoosha ayaa xalliyay dhibaatadayda! Kacsanaan waarta ayaa si weyn u wanaajisay libidokayga!"
Lammaanahaygu wuxuu yiri 'mahadsanid'
"Ka daashay helitaanka cudurdaar la mid ah. "Waxaan dareemayaa maanta xanuun," "Madax xanuun", iwm ... Marka waxaan isku dayay Sikander-e-Azam iyo Kaabsal! Dulucda hoose ee daanyeerka, galmada iyo daalka ayaa la waayey! Hadda waxaan la seexdaa xaaskeyga maalin walba oo wax badan weyddiistaa! Xaaskeyga Sony Kalra ayaa yiri, 'Waad mahadsantahay".
Hillaacyo cabsi badan
"Mar kasta oo aan asxaabtayda ku tiiriyo, waxay la mid ahayd welwelka 'Haddii aan guriga la tago haweenay', waligeed sidii ay ahayd ma aha. Maanta, si kastaba ha noqotee, Sikander-e-Azam oo lagu daray Capsule waxay i siisay riix aan u baahanahay si aan u gaaro kacsanaan xoog leh."
Xanaaqyadu hadda dhibaato dambe kuma jiraan
"Saaxiib wanaagsan ayaa iisoo bandhigay Sikander-e-Azam iyo Capsulen waana inaan kudaaweel, maxaa yeelay xaalkeygu maalinba maalinta ka sii xumaanaysay. Kaabsalkan sixirka ah wuxuu i siiyay bikradnimadii aan markasta sariirta raadinayay. Qoro, fiiri natiijooyinka naftaada!"
IS iibsanayso internetka si amaan ah?
Iibsashada Sikander-e-Azam iyo Capsule gabi ahaanba way fududahay waana aamin, sirta adag ee macaamiisha ayaa la ilaaliyaa.
Waxaan balan qaadaynaa isla markaana hubinaynaa in xogtaada aan la wadaagin.
Xogta maaliyadeed waa 256 xoogaa sir ah
100% Ammaan & Amni
Dhoofinta ayaa gebi ahaanba bilaash ah.
Kaliya nidaamyadeena ayaa dammaanad qaadi kara natiijooyinka la-yaab leh, maadaama kaliya Sikander-e-Azam lagu daro waxay dammaanad qaadi karaan saxnaanta agabyada ceyriinka iyo habka waxsoosaarka iyadoo la waafajinayo heerarka tayada qaran iyo kuwa caalamiga ah. Intaa waxaa sii dheer, kaliya Sikander-e-Azam oo lagu daray qorshe wax-ku-ool ah oo dhammaystiran oo badbaado leh ayaa la tijaabiyay kumanaan kun oo rag ah oo ay ansixiyeen khubaradu kuna saleysan natiijooyinka.
Thanks to Sikander-e-Azam oo lagu daray guulo tan iyo markii la bilaabay, shirkado badan oo aan daacad ahayn ayaa ku dayanaaya alaabadayada. Soojiidasho! U fiirso nuqullada qiime jaban: xitaa waxaa ku jira walxaha khatarta ah. Ilaali caafimaadkaaga marwalbana raadso asalka Sikander-e-Azam ee asalka ah..
Sikander-e-Azam oo lagu daray kaabsoosha, guta nolol galmo oo dhammaystiran oo qancinaysa
Waa maxay Sikander-e-Azam iyo Kaabsoosha?
Sikander-e-Azam iyo Kaabsooshadu waa 100% kabitaan dabiici ah. Waxay kordhisaa rabitaanka galmada, muddada iyo awoodda kacsanaanta, waxayna sii kordhisaa cabirkaaga.
Sidee ayuu Sikander-e-Azam iyo Kaabsooshaku u shaqeeyaan?
Sikander-e-Azam iyo Kaabsooshaku waxay kor u qaadaan caafimaadka corpora cavernosa si ay u noqdaan kuwa laxaad leh oo ay ku keydiyaan dhiig badan. Tani waxay kordhisaa socodka dhiigga guska. Tan, waxaad haysataa dhismooyin xoog badan, sii dheereeya oo weynaada iyo xoog badan. Intaa waxaa dheer, Sikander-e-Azam oo lagu daray kaabsoosha ayaa siisa tamar si loogu raaxeysto awooddaada galmada ee kordhay!.
Sidee ayaan u isticmaali karaa Sikander-e-Azam iyo Kaabsoosha?
Natiijooyinka ugu wanaagsan, u qaado Sikander-e-Azam maalin kasta oo lagu daro kaabsoosha kaabsal, 2 kaabsal maalin kasta si aad had iyo jeer diyaar ugu tahay raaxada galmada ugu dambaysa. Haddii aad rabto xitaa saameymo aad u wanaagsan, isku day kiniin dheeraad ah 30 daqiiqo ka hor fal galmo kasta oo naftaada la yaab!
Ma jiraan wax dhibaato ah oo ka imaan kara isticmaalka Sikander-e-Azam iyo kaabsoosha kaabsoosha ah?
Ma jiraan wax saameyn ah oo ka imaanaysa isticmaalka sheyga, qof walbana wuu qaadan karaa oo wuu ku raaxeysan karaa faa'iidooyinkiisa. Si kastaba ha noqotee, haweenka uurka leh, hooyooyinka nuujinaya, carruurta iyo dadka buka ama sii wadida adeegsiga dawooyin kasta waa inay la tashadaan dhakhtar ka hor intaadan bilaabin isticmaalka.
Muddo intee le'eg ayaan qaadanayaa Sikander-e-Azam iyo Kaabsoosha?
Waad qaadan kartaa Sikander-e-Azam iyo Kaabsal inta aad jeceshahay inaad soosaarto nolol galmo raaxo leh.
Ma Sikander-e-Azam oo lagu daray Kaabsal si cilmiyaysan loo caddeeyay?
Daraasadaha caafimaad ee ay sameeyeen khubaro madax-bannaan, oo ay ku jiraan in kabadan 4,000 oo nin oo qaata Sikander-e-Azam iyo Capsule, ayaa la xaqiijiyay inay kordhinayaan awooda iyo raaxada galmada..
NOLOSHAADA NOLOSHAADA OO AAD MARKAAD BADBAADISATO
HALKAN HALKAN Sikander-e-Azam lagu daray CAPSULE.
Dareen farxadda iyo aaminaada ay kalgacalka weyn dareemaan.
Hel awood aad ku sameyso galmada ugu fiican adduunka, dareemaan cabsi ku saabsan waxqabadkaaga ugu fiican.
Noocyada ugu halista badan iyo raaxada galmada ugu qoto dheer abid.
GUDDO GAAR AH Illaa 10% XAQIIQ
UGU SAMEE CADAWADA
SOO SAARO AMARKAAGA!
Amarka Hadda !
Xuquuqda daabacaadda© 2020 Sikander-e-Azam plus Capsule
Waad ka gadan kartaa Sikandar-e-Azam herbal penus balaarin balaastik ah dukaamada caafimaadka, Ama email noogu soo dir info@hashmi.com, soo wac ama WhatsApp taleefanka 9058577992. Fadlan ha u dirin lacag hormaris. Kaliya samee amarka oo waxaan kuugu soo diri doonaa COD (Cash On Delivery) baako cinwaankaaga ah, sheygan gaarka ah wuxuu kugu soo gaari doonaa meel kasta oo adduunka ah 3-10 maalmood gudahood.